Ukuphathwa Komkhiqizo: Ukugxila Kwabathengi uma kuqhathaniswa Nemikhiqizo Egxilwe Kumkhiqizo
Imfihlo Yokwakha Umkhiqizo Wakho njengeNike noma iCoca-Cola
NgoMsombuluko, Februwari 15, 2010 NgeSonto, ngoMashi 24, 2013 UGrant Lange
INike ihambisa imikhiqizo eminingi kumsubathi wokuncintisana.
Kusakhiwo sokubeka uphawu lwaseMelika, kunezinhlobo ezimbili kuphela zemikhiqizo: kugxile kubathengi or okugxilwe kumkhiqizo.
Uma uzokwenza noma yimuphi umsebenzi wokuzungeza nomkhiqizo wakho, noma ukhokhelwa ukuzulazula ngomkhiqizo womunye umuntu, ungazi kangcono ukuthi hlobo luni lomkhiqizo onalo. Imithetho yokuthi ungasebenza kanjani ngakunye ihluke KAKHULU futhi inweba ize ifike ekuthumeleni imiyalezo, ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha, ukukhethwa kwesiteshi, izici zomkhiqizo / izinzuzo, noma okunye ukukhetha koMkhiqizo noma kokuMaketha.
Vele uzobuza: "Akuzona zonke izinkampani ezinophawu okufanele zigxile kubathengi nakumkhiqizo?" Yebo. Kepha okubaluleke lapha ukuthi umkhiqizo ugxile kuphi, nokuthi uhlose ukukhula kanjani. Ake singene:
Umkhiqizo Ogxile Kumthengi
Umkhiqizo ogxile kumakhasimende ukhomba uhlobo lomsebenzisi olusemqoka, bese uletha ngokweqile imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zomsebenzisi. Imephu yalolu hlobo lomkhiqizo ibukeka kanjena:
Izibonelo zemikhiqizo ethile egxile kubathengi: INike, Apple, BMW, Harley-Davidson
Endabeni yeNike, lo mkhiqizo uzungeze i- Umpetha Wokuncintisana. INike igxilisa ukunaka kwabo konke kuMsubathi, kepha iletha okuningi kakhulu kunezicathulo; ziletha yonke imikhiqizo ezungezile edinga i-Athlete ukuze ibe nokuhlangenwe nakho. Isibonelo, ku-basketball uNike uthengisa izicathulo, imfudumalo, izikhindi, ijezi, ibhande lekhanda, ibhodlela lamanzi, isikhwama sezemidlalo, ithawula nebhola. Ukuphela kwento abangayithengisi yinkantolo ye-basketball, kepha mhlawumbe bayayixhasa.
Umqondo wokuthi bathengisa yonke le mikhiqizo ye-basketball ungabonakala njengephuzu elincane, kodwa akunjalo. Kuyingxenye nenqwaba yalokho okwenza iNike ibe ngumkhiqizo omkhulu ogxile kubathengi. Baqale njengenkampani yezicathulo, futhi bagcina sebEYINDAWO abangaya kuyo ngolwazi lwe-Athletic. Basonge imigqa eminingi yomkhiqizo, besebenzisa amafektri amaningi, ngobuchwepheshe obuningi, baba ngumbono owodwa wokubumbana webhasikidi.
Ukuqhathanisa leli phuzu: Ukube uCole-Haan ubengakwenza lokhu azungeze i- Ochwepheshe bezebhizinisi. Kuzofanele bakhe inkampani engathengisi kuphela izicathulo zokugqoka, kepha futhi ithengise amasudi ebhizinisi, amashethi okugqoka, othayi, izikhwama, amaphepha, amapeni, nezinkomishi zekhofi. Cabanga ngohlobo lomzamo wokuthuthuka komkhiqizo ozothatha ukwakha yonke leyo migqa. (okuyikho kanye abayikho ukwenza)
Umkhiqizo Ogxile Komkhiqizo
Umkhiqizo ogxile kumkhiqizo ukhomba uhlobo oluyinhloko lwenkinga, bese uletha ngokweqile isisombululo kunoma yiluphi uhlobo lomsebenzisi ohlangabezana naleyo nkinga. Imephu yalolu hlobo lomkhiqizo ibukeka kanjena:
(Izibonelo zemikhiqizo ethile egxile kumkhiqizo: Amaza, iCrest, iKleenex, iCoke, iMcDonalds, iMarlboro, iGoogle)
UCoca-Cola wenze umsebenzi oncomekayo wokuxazulula ukoma / ukwaneliseka izinkinga zazo zonke izinhlobo zamakhasimende. I-Coke ayenzi lutho ngaphandle kwe-cola, kepha iletha izindlela ezahlukahlukene kakhulu kangangokuba kube khona umuntu ophilayo ongawuqondi umkhiqizo weCoke.
Bashintsha kuphela izithako ezimbalwa (ushukela ne-caffeine) nezindlela zokulethwa (umthombo, ibhodlela, ikani) futhi bangashaya noma yimuphi umthengi laphaya. Izibonelo ezimbalwa: Okomndeni ekhaya: amabhodlela ama-2 litre; kumuntu oqonda isisindo on-the-go: amathini ayi-12 oz coke can; esidlweni sokudla esisheshayo abafuna inani eliningi: umthombo ongapheli wesoda; kubaphathi behhotela le-swanky bar: amabhodlela engilazi ayi-8 oz. Umkhiqizo ofanayo, izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende zahlangatshezwa.
Ngakho-ke, hlobo luni lomkhiqizo enginalo?
Kukhona ukuhlolwa okulula kwe-litmus kokunquma uhlobo lomkhiqizo osebenza nalo. Kepha okokuqala, inothi lokuthi kungani udinga ukwazi lokhu njengochwepheshe wokumaketha noma wokuthuthukisa umkhiqizo. Uma wazi ukuthi uluhlobo luni lomkhiqizo, luyakutshela okungafanele ukwenze.
Okungukuthi, ungashintshi ikhasimende uma unomkhiqizo ogxile kumakhasimende, futhi ungaguquli umkhiqizo womkhiqizo ogxile kumkhiqizo. Ngiyazi ukuthi lokhu kuzwakala kuyisimungulu, kepha ngihlale ngendlela emihlanganweni eminingi kakhulu yokuThuthukiswa koMkhiqizo ukucabanga ukuthi akwenzeki. Empeleni, ngabheja endaweni ethile e-Italy, kunesisebenzi esihle kakhulu eFerrari (ikhasimende: i-macho speed guy) ehlongoza ukuthi yethule umugqa omusha weSUV (ikhasimende: umama webhola lezinyawo). Konke ngoba abaqondi ukugxila kwabo.
Kuyini ukuhlolwa kwe-litmus? Kulula:
Uma ufuna ukubeka uphawu lomkhiqizo endaweni ethile emzimbeni wakho, noma unamathisele imoto yakho kuyo, iyi- Umkhiqizo ogxile kumakhasimende.
Uma ucabanga kakhulu ngalo mkhiqizo, kepha awufuni ukuwugqoka, iyi- umkhiqizo ogxile kumkhiqizo.
Uma ungafuni ukugqoka lo mkhiqizo, noma ucabanga kakhulu ngawo, kumane nje kuyindlela ye- uphawu olubi.
Tags: brandukumaketha komkhiqizoi-coca-colai-cokeunikeziwenikei-pepsi
UGrant Lange ungomunye wamalungu asungula i- Isitudiyo Sobufakazi, iqembu lomkhiqizo nokukhulisa umkhiqizo. Usebenza nezinkampani ezinkulu nezincane ukwenza amasu wokukhiqiza kahle nokuthuthukisa umkhiqizo.
Ukubhuloga kwe-B2B - I-Webtrends Engage 2010
Hlunga izizinda ezingezansi ku-Google Analytics
Okthoba 17, 2011 ngo-12: 49 AM